သငျ့ မှေးလ အလိုကျ အရမျး မှနျေ သာ စိတျနေ သဘော ထားမြား…ကွညျ့လိုကျရအောငျ – Shwe Naung
မှေးလအ လိုကျ စိတျနသေဘောထားမြား
January – အေးအေးလေး နတေတျသူ ဒေါသစိတျ ကို ထိနျးနိုငျသူ အခဈြကွီးတယျ သံယောဇဉျတှယျတာ မွနျတယျ မနေို့ငျတဲ့စိတျ မှေးဖှားတတျတယျ။
February – အာရုံနောကျတာ မကွိုကျဘူး စိတျထဲမှာ ရှိနတောကို ဖှငျ့ဟ ပွောဆိုတတျတယျ ။ အမုနျးမပှားဘူး တဈယော ကျထဲ ရှိနခြေိနျ ဝါသနာပါတဲ့ အလုပျမြိုး လုပျတတျသူ….။
March – ဒေါသထှကျလာရငျ ဘာမှ မကွညျ့တော့ဘူး အရှဲ့အရမျးတိုကျတယျ အားနာတတျတယျ ကူညီခငျြစိတျ အပွညျ့ရှိတယျ။ သနားတဲ့ စိတျကွောငျ့ ခံစားနရေ တတျတယျ အရမျး ခဈြတတျကွတယျ။
April – တဈယောကျထဲ ရှိနခြေိနျ အတှေးမြားစှာနဲ့ စဉျစားနတေတျကွတယျ ဦးဆောငျသူအဖွဈရပျတညျခငျြစိတျရှိသညျ။ ဒေါသ ကွီးတယျ ဘာပဲ လုပျလုပျ တိတိကကြ လုပျရမှ ကနြေပျတယျ။ ကိုယျဘကျက စတေနာထားပွီလုပျပေးလိုကျတဲ့ အရာအပျေါ ဘာအကြိုးအမွတျမှ မရရငျနပေါစေ…။ သူတဈပါး စိတျခမျြးသာရငျ ကနြေပျနတေတျကွတယျ သနားကွငျနာစိတျရှိကွသညျ။
May – အားအရမျး နာတတျတယျ ကိုယျကွောငျ့သူတဈပါး စိတျညဈသှားမှာ စိုးရိမျတတျတယျ။ အားငယျတတျတယျ ဝမျးနညျစရာတှေ တှကွေုံ့လာရငျ ငိုတတျကွတယျ အေးအေးခမျြးခမျြး နထေိုငျခငျြစိတျ ရှိကွတယျ။
June – ဘယျလောကျခကျခဲနပေါစေ ကွိုးစားခငျြစိတျ ရှိကွတယျ ဒါပမေဲ့ လကျလြှော့လိုကျပွီဆိုရငျတော့ လုံးဝ ဥပက်ေခာ ပွုနိုငျကွတယျ။ အခဈြကွီးတယျ ခံစားရမှာ ကွောကျတတျကွတယျ ဘယျလောကျပဲ ခံစားနရေပါစေ တခွားလူမသိအောငျ ဟနျဆောငျတတျကွတယျ။
July – ဂဈြကနျကနျနထေိုငျတာ မဟုတျဘူး စိတျထဲ ဘဝငျသိပျမတှလေို့ ဂဈြကနျကနျလို့ထငျခံရတာ…. အေးအေးဆေးဆေး နတေဲ့ အခြိနျဆို အ တယျထငျလို့ အကွောငျးသိအောငျ လုပျပွ ပွောဆိုပွတာ အားနာတတျတယျ .အမုနျးမပှားခငျြဘူး သံယောဇဉျတအားကွီးတယျ။
August – သူတဈပါးကိုလညျး အနိုငျမကငျြ့ဘူးကိုယျအပျေါကို အနိုငျယူလာရငျလညျး ငွိမျမခံတတျဘူး။ မဟုတျ မခံ နထေိုငျတယျ အခဈြကွီးတယျ မုနျးသှားပွီဆို လှညျ့ကို မကွညျ့တတျဘူး။
September – စကားမြားတာ နားပူတာ မကွိုကျဘူး ဒါပမေဲ့ တဈခါတလေ စကားအမြားကွီး ပွောတတျကွတယျ။ သံယောဇဉျ အရမျးကွီးတယျ နာကငျြလာအောငျလုပျတဲ့ သူတှကေို ကောငျးကောငျး ပညာပွနျပေးတတျတယျ ကူညီခငျြစိတျအပွညျ့ရှိတယျ။
October – ကိုယျရဲ့ အောကျလကျငယျသားမြားအပျေါ ကူညီခငျြကွတယျ အားနာတတျတယျ။ အခဈြကွီးတယျ ဘာလေးပဲ စားစား သူတဈပါးကို ကြှေးခငျြကွတယျ အေးခမျြးစှာ နထေိုငျရတာ သဘောကတြယျ အခဈြကွီးကွတယျ။
November – စိတျထဲမှာ လူတဈယောကျကို လုံးဝ လကျမခံတော့ဘူးဆိုရငျ လုံးဝ လှညျ့မကွညျ့တော့ပါ။ စိတျထဲမှာ ဘယျလောကျ ခံစားနရေပါစေ ဘာမှ မဖွဈသလို နတေတျကွတယျ အခဈြကွီးတယျ ဟနျဆောငျတာ လိမျညာတာ အရမျး မုနျးတယျ။
December – စိတျထား နူးညံ့တယျ နှလုံးသားရေးကိစ်စကို ကံဆိုးနတေယျ ထငျတတျတယျ။ အေးခမျြးစှာ နထေိုငျရငျး ဘဝကို ဖွတျသနျးနကွေတယျ အမုနျးဆိုတာ မရှိပမေဲ့ မုနျးသှားတဲ့သူဆို လုံးဝပဲ…..။ သူ ဘဝမှာ အမှတျတရ မြားစှာကို မှတျသားတတျကွတယျ အခဈြကွီးတယျ သံယောဇဉျ တှယျတတျကွတယျ။
မွေးလအ လိုက် စိတ်နေသဘောထားများ
January – အေးအေးလေး နေတတ်သူ ဒေါသစိတ် ကို ထိန်းနိုင်သူ အချစ်ကြီးတယ် သံယောဇဉ်တွယ်တာ မြန်တယ် မေ့နိုင်တဲ့စိတ် မွေးဖွားတတ်တယ်။
February – အာရုံနောက်တာ မကြိုက်ဘူး စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတာကို ဖွင့်ဟ ပြောဆိုတတ်တယ် ။ အမုန်းမပွားဘူး တစ်ယော က်ထဲ ရှိနေချိန် ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်မျိုး လုပ်တတ်သူ….။
March – ဒေါသထွက်လာရင် ဘာမှ မကြည့်တော့ဘူး အရွဲ့အရမ်းတိုက်တယ် အားနာတတ်တယ် ကူညီချင်စိတ် အပြည့်ရှိတယ်။ သနားတဲ့ စိတ်ကြောင့် ခံစားနေရ တတ်တယ် အရမ်း ချစ်တတ်ကြတယ်။
April – တစ်ယောက်ထဲ ရှိနေချိန် အတွေးများစွာနဲ့ စဉ်စားနေတတ်ကြတယ် ဦးဆောင်သူအဖြစ်ရပ်တည်ချင်စိတ်ရှိသည်။ ဒေါသ ကြီးတယ် ဘာပဲ လုပ်လုပ် တိတိကျကျ လုပ်ရမှ ကျေနပ်တယ်။ ကိုယ်ဘက်က စေတနာထားပြီလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ အရာအပေါ် ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မရရင်နေပါစေ…။ သူတစ်ပါး စိတ်ချမ်းသာရင် ကျေနပ်နေတတ်ကြတယ် သနားကြင်နာစိတ်ရှိကြသည်။
May – အားအရမ်း နာတတ်တယ် ကိုယ်ကြောင့်သူတစ်ပါး စိတ်ညစ်သွားမှာ စိုးရိမ်တတ်တယ်။ အားငယ်တတ်တယ် ဝမ်းနည်စရာတွေ တွေ့ကြုံလာရင် ငိုတတ်ကြတယ် အေးအေးချမ်းချမ်း နေထိုင်ချင်စိတ် ရှိကြတယ်။
June – ဘယ်လောက်ခက်ခဲနေပါစေ ကြိုးစားချင်စိတ် ရှိကြတယ် ဒါပေမဲ့ လက်လျှော့လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ လုံးဝ ဥပေက္ခာ ပြုနိုင်ကြတယ်။ အချစ်ကြီးတယ် ခံစားရမှာ ကြောက်တတ်ကြတယ် ဘယ်လောက်ပဲ ခံစားနေရပါစေ တခြားလူမသိအောင် ဟန်ဆောင်တတ်ကြတယ်။
July – ဂျစ်ကန်ကန်နေထိုင်တာ မဟုတ်ဘူး စိတ်ထဲ ဘဝင်သိပ်မတွေ့လို့ ဂျစ်ကန်ကန်လို့ထင်ခံရတာ…. အေးအေးဆေးဆေး နေတဲ့ အချိန်ဆို အ တယ်ထင်လို့ အကြောင်းသိအောင် လုပ်ပြ ပြောဆိုပြတာ အားနာတတ်တယ် .အမုန်းမပွားချင်ဘူး သံယောဇဉ်တအားကြီးတယ်။
August – သူတစ်ပါးကိုလည်း အနိုင်မကျင့်ဘူးကိုယ်အပေါ်ကို အနိုင်ယူလာရင်လည်း ငြိမ်မခံတတ်ဘူး။ မဟုတ် မခံ နေထိုင်တယ် အချစ်ကြီးတယ် မုန်းသွားပြီဆို လှည့်ကို မကြည့်တတ်ဘူး။
September – စကားများတာ နားပူတာ မကြိုက်ဘူး ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေ စကားအများကြီး ပြောတတ်ကြတယ်။ သံယောဇဉ် အရမ်းကြီးတယ် နာကျင်လာအောင်လုပ်တဲ့ သူတွေကို ကောင်းကောင်း ပညာပြန်ပေးတတ်တယ် ကူညီချင်စိတ်အပြည့်ရှိတယ်။
October – ကိုယ်ရဲ့ အောက်လက်ငယ်သားများအပေါ် ကူညီချင်ကြတယ် အားနာတတ်တယ်။ အချစ်ကြီးတယ် ဘာလေးပဲ စားစား သူတစ်ပါးကို ကျွေးချင်ကြတယ် အေးချမ်းစွာ နေထိုင်ရတာ သဘောကျတယ် အချစ်ကြီးကြတယ်။
November – စိတ်ထဲမှာ လူတစ်ယောက်ကို လုံးဝ လက်မခံတော့ဘူးဆိုရင် လုံးဝ လှည့်မကြည့်တော့ပါ။ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လောက် ခံစားနေရပါစေ ဘာမှ မဖြစ်သလို နေတတ်ကြတယ် အချစ်ကြီးတယ် ဟန်ဆောင်တာ လိမ်ညာတာ အရမ်း မုန်းတယ်။
December – စိတ်ထား နူးညံ့တယ် နှလုံးသားရေးကိစ္စကို ကံဆိုးနေတယ် ထင်တတ်တယ်။ အေးချမ်းစွာ နေထိုင်ရင်း ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေကြတယ် အမုန်းဆိုတာ မရှိပေမဲ့ မုန်းသွားတဲ့သူဆို လုံးဝပဲ…..။ သူ ဘဝမှာ အမှတ်တရ များစွာကို မှတ်သားတတ်ကြတယ် အချစ်ကြီးတယ် သံယောဇဉ် တွယ်တတ်ကြတယ်။
တဈနေ့ တာ ရယျမော စမေဲ့ ဟာသ ဆနျလှနျး တဲ့ ဖွဈရပျမှနျ ဓာတျပုံမြား…